August 2018 - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
Does baby's poop color indicate specific health condition?
ကလေးငယ်ရဲ့ဝမ်းအရောင် မေမေတို့ဟာ ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးငယ်လေးတွေကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ ဂရုစိုက်တတ်ကြပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ဝမ်းအရောင်ကအစ ဂရုစိုက်ကြည့်တတ်ပါတယ်။ ဒါဟာ ကောင်းမွန်တဲ့အကြည့်ပါ။ သားသားမီးမီးလေးတို့ရဲ့ ဝမ်းအရောင်တွေဟာ ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကို ပြသနေလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ *ဝမ်းအရောင် စိမ်းစိမ်းလေး (Green baby poop) သံဓာတ်အားဖြည့်ဆေးတိုက်ထားတဲ့ ကလေးငယ်တွေမှာ…
စိတ်ဖိဆီးမှုများကြောင့် ခေါင်းကိုက်တဲ့အခါ မွန်းလွဲတစ်နာရီထိုးချိန်၏ နေ့အပူဒဏ်အောက်ဝယ် ပျားပန်းခတ်မျှ လှုပ်ရှားနေသောလူများ၊လမ်းများကိုကုမ္မဏီရုံးခန်းအတွင်းမှငေး ကြည့်ပြီး ခိုင်တစ်ယောက်စိတ်ပိုညစ်ညူးလာသည်။ ဒီနေ့က ခိုင့်အတွက်တော့ တွတ်ပီကံမကောင်းပါလား အော်ရသည့်နေ့။ များပြားလှသောတစ်လစာ အရောင်းအဝယ်စာရင်းများကြားမှ အရေးကြီးသောငွေပေးငွေယူဘောက်ချာတစ်ရွက်စာရင်းပျောက်နေသောကြောင့်ကွန်ပြူတာမှတ်တမ်းအားလုံးပြန်ဖွင့်ကာ ဒေါင်းတောက်အောင်ရှာနေရသည်။ အထက်လူကြီး၏အငြိုအငြင်မခံရအောင် ကြိုးစားရှာရသော်လည်း မနေ့က ညဘက်အိပ်ယာဝင်နောက်ကျသဖြင့် အုံခဲနေသောခေါင်းက သံရိုက်သကဲ့သို့…
အနာပဆုတ် အကြောင်းသိကောင်းစရာများ အနာပဆုတ်ဆိုတာဘာလဲ? ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်သောမွှေးကျွတ်နာ(boil)များ အစုလိုက်ဖြစ်နေခြင်းကို အနာပဆုတ်ဟုခေါ်သည်။အရွယ်အစားမှာ ပဲစေ့ခန့်မှစ၍ ဂေါက်သီး အရွယ်ခန့်ထိရှိနိုင်ပါသည်။လူတစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို့ကူးစက်နိုင်ပါသည်။ယောကျာ်းလေးတွင်အဖြစ်များသည်။ ဘယ်နေရာတွေမှာဖြစ်နိုင်လဲ? တစ်ကိုယ်လုံးတွင်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း များသောအားဖြင့် လည်ပင်း၊ပောင်၊ပေါင်ခြံ၊ချိုင်းကြား၊တင်ပါး နှင့်လိင်အဂါၤတဝိုက်တွင်ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အဝတ်အစား ကျပ်ကျပ်ဝတ်လျှင် ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အဝတ်ပွတ်တိုက်မှုများသောနေရာများတွင်လည်းဖြစ်တတ်ပါသည်။ ဘယ်လိုလူတွေမှာဖြစ်နိုင်လဲ? -တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုအားနည်းခြင်း -ဆီးချိုဝေဒနာရှင်များ -အာဟာရ…
All Articlesကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေးမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေး
Safety of sex during pregnancy
ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ချစ်တင်းနှောခြင်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံခြင်းဟာ ဗိုက်ထဲက ရင်သွေးကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သလားဆိုတာ စုံတွဲတော်တော်များများသိချင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် ချစ်တင်းနှောခြင်းဟာ ကလေးကို အန္တရာယ်မဖြစ်စေပါဘူး။ ရေမြွာအိတ်နဲ့ သားအိမ်ရဲ့သန်မာတဲ့ကြွက်သားတွေက ကလေးကို ကာကွယ်ပေးထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သားအိမ်ခေါင်းအဝနားမှာရှိနေတဲ့ ထူထဲတဲ့အချွဲတွေကလည်း ပိုးဝင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ…
What is multiparity? And Possible Complications?
သားသမီးများတဲ့ မေမေတွေ ကိုယ်ဝန်ဆောင်သားဖွားခြင်းဆိုတာ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ သဘာဝဖြစ်စဉ်တစ်ခုပါ။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမှာ အမျိုးသမီးထောင်ပေါင်းများစွာ သားဖွားနေကြတယ်လို့ စစ်တမ်းတွေက ပြောပါတယ်။ အဲဒီအမျိုးသမီးတိုင်းဟာ ပထမဆုံးကိုယ်ဝန်ဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ အချို့က ဒုတိယကိုယ်ဝန်၊ အချို့က တတိယ၊ စတုတ္ထနဲ့ အဲဒီထက်ပိုတဲ့ကိုယ်ဝန်အကြိမ်ရေတွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ နှစ်ဦး သို့မဟုတ် နှစ်ဦးထက်ပိုတဲ့…
Lifestyle that can affect female's fertility
အမျိုးသမီးများ၏သန္ဓေအောင်ဖို့စွမ်းရည်ကို ဘာတွေကဆိုးကျိုးဖြစ်စေနိုင်သလဲ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ Fertility ဆိုတာဟာ မိမိရင်မှဖြစ်တဲ့ ကလေးတစ်ဦးကို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နိုင်ခြင်း၊မွေးဖွားနိုင်ခြင်းကို ခေါ်တာပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးရဲ့ သန္ဓေအောင်နိုင်စွမ်းကို သူ့ရဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံတွေကလည်း အကျိုးများစွာသက်ရောက်စေနိုင်ပါတယ်။ လိုက်နာသင့်တဲ့အချက်တွေကတော့ -သင့်တင့်သော ကိုယ်အလေးချိန်ရအောင် ထိန်းသိမ်းပါ။ ဝလွန်းခြင်း၊ ပိန်လွန်းခြင်းဟာ မမျိုးဥကြွေခြင်းကို တားနိုင်ပါတယ်။ -လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါတွေမရအောင်ရှောင်ကြည်ပါ။…
Intrauterine fetal death/Stillbirth
” လူဖြစ်ခွင့်ရယ် မပေးတဲ့အခါ “ ကံကြမ္မာက တစ်ခါတစ်ခါ ရက်စက်လွန်းလှသည်။မလိုချင်သူများထံတွင်တော့ ကလေးတွေတစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် မွေးလာတတ်သော်လည်း…လိုချင်သူများထံတွင်တော့ …ဗိုက်ထဲက ကလေးကို လူဖြစ်ခွင့်ရယ်မပေး…အသေလေးမွေးသည့်အဖြစ်မျိုး ကြုံကြိုက်ရတတ်သည်။ စစ်တမ်းများအရ ကလေးအသေမွေးနှုန်းသည် တစ်နိုင်ငံနဲတစ်နိုင်ငံ ကွဲပြားမှုရှိပြီး၊ ယေဘုယျအားဖြင့် ကလေးအယောက် ၁၀၀၀ မွေးလျှင် ၅ယောက်မှ…
Should infant's hair be shaved or not?
မွေးကင်းစကလေးခေါင်းရိတ်သင့် မရိတ်သင့်? မွေးကင်းစကလေးငယ်တွေရဲ့ ဆံပင်ကိုရိတ်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆ လူတော်တော်များများမှာရှိပါတယ်။ အများစုကတော့ ရိုးရာဓလေ့ကြောင့်ပါပဲ။ အချို့ကလည်း ကလေးရဲ့မွေးဆံပင်ကိုရိတ်ပစ်မှ ဆံပင်ပိုသန်မယ် ဆံပင်ပိုထူမယ်လို့ ဆိုကြပြန်ပါတယ်။ အချို့မိဘတွေကတော့ ဒီအယူအဆတွေကို မယုံကြပါဘူး။ တကယ်တော့ ဆံပင်ဆိုတာ ဦးရေပြားရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ Hair follicle ကနေတစ်ဆင့်ပေါက်လာတာပါ။…
Importance of fetal kick count
ကလေးလှုပ်တာ မှတ်သားစရာ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ မေမေတို့သိသင့်တဲ့ ကလေးလှုပ်ခြင်းအကြောင်းကို အမေးအဖြေလေးတွေနဲ့ ရေးသားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ *Fetal kick counting/ကလေးလှုပ်တာကိုမှတ်ရမယ် ဆိုတာဘာလဲ? ကလေးလှုပ်ခြင်းကို မှတ်တာဟာ အသက်မပါတဲ့ကလေး (Still birth) တွေမွေးခြင်းကို ကာကွယ်တဲ့နည်းတစ်မျိုးပါပဲ။ ကိုယ်ဝန် ၂၈ပတ်ကနေ ကလေးမွေးတဲ့အထိ ကြားထဲမှာ…
Facebook1,714,063 LikesTwitter1,654 FollowersInstagram1,176 FollowersYoutube4.11K Followers